Home » Lahatsoratra farany farany » Airlines » Qatar Airways miady amin'ny fanondranana olona an-tsokosoko ny bibidia
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Crime • Vaovao • People • Vaovao farany momba ny Qatar • tompon'andraikitra • Safety • News sustainability • Tourism • Fitaterana • Travel Wire News
Ny fanombanana ny Illegal Wildlife Trade (IWT) dia novolavolain'ny International Air Transport Association (IATA), miaraka amin'ny fanohanan'ny ROUTES, ao anatin'ny rafitra fitantanana sy fanombanana ny tontolo iainana an'ny IEnvA - IATA ho an'ny zotram-piaramanidina. Ny fanarahana ny fenitra IWT IEnvA sy ny fampiharana azo ekena (ESARPs) dia ahafahan'ny mpanao sonia seranam-piaramanidina mankany United for Wildlife Buckingham Palace Declaration mba hampiseho fa nampihatra ny fanekena ifandraisany ao anatin'ny Fanambarana izy ireo.
Qatar Airways, mpikambana mpanorina ny United for Wildlife Transport Taskforce, dia nanao sonia ny Fanambarana Palace Buckingham manan-tantara tamin'ny 2016.
Ny Fanambarana ao amin'ny Palace Buckingham dia mikendry ny handray fepetra tena hanidiana ny làlana nohararaotin'ireo mpivarotra amin'ny varotra bibidia tsy ara-dalàna, mba hamindrana ny vokatr'izy ireo.
Tamin'ny volana mey 2019, Qatar Airways no lasa kaompaniam-piaramanidina voalohany manerantany nahatratra ny mari-pahaizana momba ny fanombanana ny Illegal Wildlife Trade (IWT).
Qatar Airways dia nanitatra ny fandraisany anjara tamin'ny fiaraha-miombon'antoka USAID ROUTES (Fampihenana ny fahafaha-mitarika amin'ny fitaterana karazan-java-maniry tandindonin-doza), manamafy ny fahavononany hiady amin'ny fanondranana olona an-tsokosoko ny bibidia sy ny vokatra.
Qatar Airways, mpikambana mpanorina ny Tafaray ho an'ny Taskforce momba ny fitaterana biby, nanao sonia ilay manan-tantara Fanambarana tao amin'ny lapan'i Buckingham tamin'ny 2016, kendrena handray fepetra tena hanidiana ny làlana nohararaotin'ny mpivaro-tena amin'ny varotra bibidia tsy ara-dalàna, mba hamindrana ny vokatr'izy ireo. Taorinan'ny volana Mey 2017 dia nanasonia ny Memorandum of Understanding voalohany niaraka tamin'ny ROUTES Partnership ny zotram-piaramanidina. Tamin'ny volana mey 2019, Qatar Airways no lasa kaompaniam-piaramanidina voalohany manerantany nahatratra ny mari-pahaizana momba ny fanombanana ny Illegal Wildlife Trade (IWT). Ny fanamarinana ny fanamarinana IWT dia manamafy fa ny Qatar Airways dia manana fomba fiasa, fiofanana momba ny mpiasa ary ny fanaovana tatitra momba ny protokoloka izay mahatonga ny fanondranana an-tsokosoko ireo vokatra bibidia tsy manara-dalàna.
Qatar Airways Ny Lehiben'ny Executive Group, ny Andriamatoa Akbar Al Baker, dia nilaza hoe: "Ny varotra bibidia tsy ara-dalàna sy tsy maharitra dia mandrahona ny zava-manan-karena manerantany, ary mitera-doza amin'ny fahasalamana sy fiarovana, indrindra amin'ireo vondrom-piarahamonina voahilikilika. Mandray fepetra izahay hanakorontanana ity varotra tsy ara-dalàna ity mba hitehirizana ny harena voajanahary sy hiarovana ireo tontolo iainantsika marefo. Niorina hatrany tamin'ny mpitarika indostrian'ny seranam-piaramanidina hafa izahay mba hanamafisana ny politikanay tsy fandeferana manoloana ny fanondranana olona an-tsokosoko ny bibidia sy ny vokatra ao aminy, ary miditra ao amin'ny ROUTES Partnership izahay milaza hoe - 'Tsy Miaraka Aminay'. Hanohy hiara-hiasa amin'ireo mpiray antoka aminay izahay mba hampahafantatra sy hanatsara ny fitadiavana ireo hetsika biby tsy ara-dalàna mba hiarovana ireo zavaboary sarobidy ireo. ”
Andriamatoa Crawford Allan, ny ROUTES Partnership Lead, dia niarahaba ny fitarihana izay nasehon'ny Qatar Airways tamin'ny ezaka mba hisorohana ny fanondranana olona an-tsokosoko fa: "Tamin'ny alàlan'ny hetsika fanentanana, ny fampiofanana ary ny fanondranana zava-mahadomelina ao anaty tetikadiny dia naneho ny fahavononany ny Qatar Airways Fanambarana ao amin'ny lapan'i Buckingham ary ho an'ny tanjon'ny fiaraha-miasa ROUTES. Faly aho fa mahita fa manohy ireo ezaka ireo ny Qatar Airways ary anisan'ny orinasa mitombo isa milaza fa Tsy Miaraka Aminay io. ”
Ny areti-mandringana COVID-19 dia naneho fa ny heloka bevava amin'ny biby dia mampidi-doza tsy ny tontolo iainana sy ny zava-manan'aina ihany, fa koa ny fahasalaman'ny olombelona. Na eo aza ny fivezivezena voafetra, ny tatitra momba ny fanararaotana bibidia tsy ara-dalàna tato anatin'ny herintaona dia nanambara fa mbola manararaotra manondrana an-tsokosoko ny entana an-tsokosoko amin'ny alàlan'ny rafitra fitaterana an'habakabaka ireo mpivarotra. Qatar Airways dia manaiky fa miaraka amin'ny fanohanan'ny USAID ROUTES fiaraha-miasa, ny indostrian'ny fitaterana an-habakabaka dia afaka miroso mankany amin'ny planeta maitso izay misy ny tontolo iainana sy ny fiarovana ny bibidia, ampahany manan-danja amin'ny toekarena mivelona miaraka amin'ireo vondrom-piarahamonina eo an-toerana.
Amin'ny maha-sonia voalohany ny Fanambarana ao amin'ny Buckingham Palace tamin'ny volana martsa 2016 ary mpikambana mpanorina ny United for Wildlife Transport Taskforce, Qatar Airways manana politika fandeferana aotra amin'ny fitaterana ny bibidia tsy ara-dalàna sy ny vokatra vokariny. Qatar Airways Cargo dia nandefa ny fizarana faharoa amin'ny fandaharana maharitra maharitra WeQare: Rewild the Planet tamin'ny fiandohan'ity taona ity, nifantoka tamin'ny famindrana ireo bibidia niverina tany amin'ny fonenany voajanahary, maimaimpoana. Ny fandraisana andraikitry ny mpitatitra entana hitahiry ny bibidia sy hamerenana indray ny planeta dia mifanaraka amin'ny fanoloran-tenan'ilay kaompaniam-pitondrana hiadiana amin'ny fanondranana bibidia sy fivarotana biby dia ary hiaro ny tontolo iainana sy ny planeta Tany.